प्रधानमन्त्रीलाई एक मास्कधारीको प्रश्न– झुटको सिलसिला कहिलेसम्म?
फणीन्द्र संगम | २०७६ असार १७ मंगलबार | Tuesday, July 02, 2019 १५:३५:०० मा प्रकाशित
डेराबाट बाहिर निस्कँदा मसँग नछुट्ने चिज हो, मास्क। गेटबाट निस्कनेबित्तिकै मेरो नाकमुखको सुरक्षाकवच बन्ने गरेको छ यो। सधैं साथमा हुने मास्क सामान्यतया दैनिक करिब २ घन्टा प्रयोग गर्छु; अफिस जाँदा र आउँदा। अन्य कामले हिँड्नुपर्‍यो भने त यो समयावधि अझ लामो बन्न पुग्छ। कुनै दिन मास्क लगाउन बिर्सियो भने बेलुका डेरा फर्कंदा रुघा लागेझैं स्याँकस्याँक भइहाल्छ। दाँतमा किटकिट मसिना धुलोका कण टोकिन्छन्।
काठमाडौं बसाइको ९ वर्षमा कुनै पनि दिन यस्तो छैन कि मैले मास्क बोक्न बिर्सिएको होऊँ। एउटा मास्क लगगभ दुई हप्ता प्रयोग गर्छु। एउटाको मूल्य ३० रुपैयाँ। हिसाब गर्नुस् त ९ वर्षमा कति रुपैयाँको मास्क लगाइएछ!
म त चस्मा पनि प्रयोग गर्छु। मास्क लगाउँदा नाकबाट निस्किने बाफले चस्मा छोपिदिन्छ। हेर्न गाह्रो पर्छ। तर, जसोतसो मास्क लगाउनु मेरो बाध्यता बनेको छ।
काठमाडौंमा धुलोधुवाँको सास्तीबारे ज्ञातव्य तपाईंले पनि मास्कको बाध्यताबारे बुझेकै हुनुपर्छ।
सडकपेटीमा बिछ्याइएका टायल एक महिना नपुग्दै झिकिन्छन्। फेरि अर्को आकारको टायल हालिन्छ। केही दिनपछि त्यही ठाउँमा माटोको थुप्रो लागेको देख्न सकिन्छ। सडक पैदल-यात्रीमैत्री छैनन्। 'रोड फर्निचर'ले प्रदूषणलाई बढवा दिएका छन्। मेलम्चीको पानी भित्र्याउन पाइप गाड्ने क्रममा उडेको धुलोले कतिको स्वास्थ्यमा असर पुर्‍यायो होला? पुराना गाडीबाट निस्कने धुवाँ अनि पानी परिसकेपछि चर्को घामले उडाउने धुलोले कति बिरामी अस्पताल पुगे होलान्?
प्रधानमन्त्रीले बोलेको बोली रेकर्डबाट हटाउनुपरेको नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो घटना भइदियो। किन यसरी आफ्नै बोलीका कारण विश्वास गुमाइरहनुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यु?
तर, मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनिदिनुभयो, 'अहिले मास्क लगाएर कोही पनि हिँड्दैन।’
उहाँको यो समाचार पढ्दा म मास्क लगाएरै सार्वजनिक गाडीमा कीर्तिपुर फर्किइरहेको थिएँ। एकछिन त गम खाएँ के यो अभिव्यक्ति मेरो देशका प्रधानमन्त्रीकै हो!
थप विश्वस्त हुन भिडियो खोजेँ। त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको रहेछ, ‘म प्रधानमन्त्री भएका बेला भनेको थिएँ, अब काठमाडौंमा नाक समातेर हिँड्नु पर्दैन। मैले मास्क लगाउनु पर्दैन भनेको थिएँ। म प्रधानमन्त्री हुँदा आधा जनसंख्या मास्क लगाएर हिँड्थ्यो, अहिले मास्क लगाएर कोही पनि हिँड्दैन।’
उहाँले यति भनिनसक्दै पररर्र ताली बजेको पनि सुनिन्छ।
कसरी झुट बोल्न सक्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यु? कहिल्यै उपत्यकाका सडकमा पैदल हिँडी यहाँका बासिन्दासँग कुरा गर्नुभएको छ? कुनै दिन सडकको अवस्था र वायु प्रदूषणबारे जानकारी लिनुभएको छ?
एसीवाला गाडीमा अगुवा-पछुवा सुरक्षागार्ड राखेर सवारी चलाउने तपाईंलाई के थाहा मास्कधारीको पीडा? नत्र कसको सूचनाको आधारमा यस्तो तथ्यहीन कुरा गर्न सक्नुभयो?
घरी चिनी व्यापारीले नराम्रोसँग झुक्याएको भन्नुहुन्छ, घरी मेलम्ची आयोजनामा सचिवको झुटको सिकार भएँ भनेर लाचार व्यक्त गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले बोल्ने शब्दहरु दीर्घकालीन रुपमा अर्थ राख्ने खालका हुनुपर्छ कि फेक ट्विटेका उडन्ते गफ जस्ता?
प्रिय पाठक, नाथे मास्कको सामान्य विषयलाई किन उठाइरहेको होला भन्ने पनि लाग्ला तपाईंलाई। तर, मैले मास्कभन्दा पनि देशको कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चमा दिने अभिव्यक्तिको प्रसंग उठाउन खोजेको हुँ।
माथिको भिडियो हेर्नुभयो नि, सुन्नुस् त उहाँले कसरी सहजै झुट बोलिदिनुभयो। यस्ता बकम्फुसे कुराले आफूप्रतिको विश्वास कसरी गुमिरहेको छ भन्ने हेक्का किन राख्नुहुन्न प्रधानमन्त्रीज्यु?
मास्क जनस्वास्थ्यमा जोडिने विषय त हुँदै हो। कोही कसैले रहरले मास्क लगाउने पनि होइन।
आफू विश्वस्त नभएको कुरामा किन ढुक्कसाथ सार्वजनिक मञ्चमा प्रस्तुत हुनुभयो? जब तपाईले काठमाडौंमा मास्क लगाउन छाडे भनिरहनुभएको थियो, सिसडोलका बासिन्दाको आन्दोलनका कारण फोहोर उठ्न नसकेर काठमाडौं दुर्गन्धमा रुमल्लिइरहेको थियो।
विगतको तुलनामा यहाँको वायु प्रदूषणमा केही कमी आएको होला। तर, कुनै त्यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक भएको याद छैन, जहाँ काठमाडौं मास्कमुक्त भएको उल्लेख होस्। कुनै तथ्यमा नटेकी प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यसरी बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन?
घरी चिनी व्यापारीले नराम्रोसँग झुक्याएको भन्नुहुन्छ, घरी मेलम्ची आयोजनामा सचिवको झुटको सिकार भएँ भनेर लाचार व्यक्त गर्नुहुन्छ। सप्तरीको मलेठ घटनामा पनि तपाईंले ढाँट्नुभयो। आमसभा सकेर राजमार्ग पुगेपछि गोली चलेको भनेर तपाईंले बताए पनि मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा तपाईंले सम्बोधन गरिरहँदा नै गोली चलेको उल्लेख गरिसकेको छ।
यी केही सन्दर्भ मात्रै हुन्। यसखाले झुटको सिलसिला कहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यु? देशको कार्यकारी प्रमुखले बोल्ने शब्दहरु दीर्घकालीन रुपमा अर्थ राख्ने खालका हुनुपर्छ कि फेक ट्विटेका उडन्ते गफ जस्ता?
तपाईंले कहाँ कस्ता अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, त्यो आम नेपालीले पछ्याइरहेका हुन्छन्। तपाईं त नेकपाको अध्यक्ष मात्रै होइन ३ करोड नेपालीको प्रधानमन्त्री पो हो त!
हुन त मिठो भ्रम छरेर झुटो कुरा प्रवाह गर्न तपाईं खप्पिस हुनुहुन्छ। र त मास्कको विषयमा पनि सहजै गफ लगाइदिनुभयो।
तुइन हटाउने वाचा गरेको वर्षौं भयो। पटकपटक 'अब कोही नेपाली भोकै बस्नुपर्दैन, जाडोले कठ्यांग्रिएर मर्नु पर्दैन' भनिरहनुहुन्छ। तर, दुर्गममा भोकमरी र तराईका गरिब न्यानो कपडा लगाउन नपाई मृत्युवरण गर्न विवश छन्। 'काम नपाएर अब कोही पनि नेपाली विदेशिनु नपर्ने' बताउने तपाईंलाई थाहा छ, दैनिक कति नेपाली परदेशको कहर भोग्न गइरहेका छन्? काठको बाकसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रने नेपालीको संख्या कति छ? हतारोमा आफ्नै नाममा 'रोजगार कार्यक्रम' ल्यानुभयो। झार उखेल्न र मकै गोढ्न 'बेरोजगार'हरुलाई हेल्मेट र ज्याकेट दिएर पठाउनुभयो। यसरी स्वाहा भएको बजेटले कस्तो रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईं?
लाग्दो हो, यो मिठो भ्रममै जनता विश्वस्त होलान्। तर तपाईंप्रति तिनै आम जनताले कस्तो अवधारणा बनाइरहेका होलान्, कहिल्यै सोच्नुभएको छ?
ठिक एक वर्ष अगाडि मदन भण्डारीलाई नै साक्षी राखेर भन्नुभएको थियो, 'तपाईंले बोलेका कुरा रेकर्डेड छन्, इतिहासमा। …कमसेकम २०१९ लाग्ला, पुस १५ सम्ममा भ्याइन भने पुस १६ लाग्ला। तर पानी जहाज (स्टिमर) चढेर कलकत्ता, निम्तो छ साथीहरुलाई।'
त्यसपछि तपाईंप्रति आएको कटाक्ष र आलोचनालाई हेक्का राख्नुभयो?
इतिहासमा रेकर्ड हुनेछन् भनेर सम्झाउने तपाईंको बोली नै रेकर्डबाट हटाइएको निकट विगत हामीसँगै छ। संसदमै प्रमुख प्रतिपक्षीहरुले सोधेको प्रश्नलाई 'निम्छरो' भनेर उडाउनुभयो। अन्तत: पछि त्यो संसदको रेकर्डबाट डिलिट गर्न लगाइयो। किन यसरी आफ्नै बोलीका कारण विश्वास गुमाइरहनुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यु?
के दुई तिहाइको दम्भ र 'अरिंगाल'हरुकै उक्साहटमा अझै हौसिइरहनुभएको छ? ती कस्ता छन् भने १०/१२ वटा 'फेक ट्विटर ह्यान्डल' बनाएर आफै त्यही फेकसँग भिडिरहेका हुन्छन्। मन्त्रीहरुले झुट नै बोले पनि सत्य साबित गराउन उनीहरु नै फेक ह्यान्डलबाट रिट्विट गरिरहेका हुन्छन्।
संसदमै प्रधानमन्त्रीले बोलेको बोली रेकर्डबाट हटाउनुपरेको नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो घटना भइदियो। यो घटनापछि पनि तपाईंले आफूलाई सुधार्न किन सक्नुभएन? तपाईं अनेक सपना देखाउने क्रममा उडन्ते कुरा गर्न हौसिनुहुन्छ। चुनावी भाषणमा गरिने आश्वासन जस्ता गफ किन दिइरहनुहुन्छ?
काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले चुनावी अभियानका क्रममा काठमाडौंलाई ‘नो मास्क सिटी’ बनाउने वाचा गर्नुभएको थियो। बरु उहाँलाई सोध्नुहोस् न, 'त्यो अभियान कता थन्कियो?'
के दुई तिहाइको दम्भ र 'अरिंगाल'हरुकै उक्साहटमा अझै हौसिइरहनुभएको छ? ती कस्ता छन् भने १०/१२ वटा 'फेक ट्विटर ह्यान्डल' बनाएर आफै त्यही फेकसँग भिडिरहेका हुन्छन्। तपाईंका महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा तिनै अरिंगाल हाबी छन्। मन्त्रीहरुले झुट नै बोले पनि सत्य साबित गराउन उनीहरु नै फेक ह्यान्डलबाट रिट्विट गरिरहेका हुन्छन्।
आफ्नो बोलीलाई तौलिन सक्नुभएन भने मलाई चिन्ता लागिरहेको छ, कतै तपाईं 'नयाँ लुगा' लगाउने बादशाह त बन्नु हुने होइन?